Home » Business Directory (Page 42)
Business Services, Free Business Listing, Website Submission | dogswonderlandmm | October 29, 2013
Dogs Wonderland House mm We areahome breed style kennel (Dogs Wonderland House MM). We offer variety of puppy breed such as Pomeranian, Labrador, Golden Re...
Blossom Professional Translation Services
Business Services, Education Services, Free Business Listing, Other Services | Blossom Professional Translation Services | October 28, 2013
We provide the translation services English- Burmese Burmese- English Available Services Business, Legal, Contract, Brochure, Education, Advertising...
Business Directory, Business Services, Hotels and Tourism, Services | nainglinhtut | October 28, 2013
မြန်မာလူမျိုးတို့ရဲ့အထွဋ်အမြတ် သီတင်းကျွတ်အခါသမယ မှာ လူကြီးမိဘ၊ ဆွေမျိုးတွေကို အိမ်တိုင်ယာရောက် သွားရောက် ဂါရဝပြု ကန်တော့ကြတာဖြင့် မြန်မာတို့ရဲ့ကျက်သရေမင်္ဂလာ ပ...
We want to sell VANNAMEI SHRIMP PD
Business Directory, International Business Listings, Stuff for Sale, Website Submission | bmgoverseadept | October 25, 2013
Dear Sir/Madam, First of all, we would like to introduce ourselves. We are BMG, the exporter of VANNAMEI SHRIMP PD in Viet Nam. We have exported to over the w...
မန္တလေးမြို. “ကြင်းတော်ယန်” ဗုဒ္ဓဘာသာဘုရားကျောင်း
Business Directory, Other Services, Services | maxyang | October 21, 2013
ခန့်ညားထည်ဝာသော ကြင်းတော်ယန် ဗုဒ္ဓဘာသာဘုရားကျောင်းတော်ကြီးသည် မန္တလေးမြို့၊ ဧရာဝတီမြစ်ဘေး ကမ်းနားလမ်းပေါ်တွင် သင့်တောင့်တင့်တယ်ဖြင့် ခန့်ညားစွာတည်ရှိနေပြီး ဗုဒ္...
Looking for Myanmar Household Workers to work in Singapore
Business Services, Employment Agency, Free Business Listing, International Business Listings, Jobs, Other Services | mandy.quinto | October 20, 2013
We are Singapore based maid agency that supply Singapore Community. As of now, we are into Filipino deployment and are now looking for possible tie up from Myan...
အဆင့်မြင့် ဈေးသက်သာသော ဝဘ်ဆိုက်များ ပိုင်ဆိုင်လိုပါသလား
Business Directory, Business Services, Free Business Listing, Other Services, Services | burmesegeek | October 17, 2013
သင့်ရဲ့စီးပွါးရေးလုပ်ငမ်းအတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ သင်ဟာ မော်ဒယ်၊ အနုပညာရှင်၊ ဓာတ်ပုံဆရာ အစရှိတဲ့ Professional တစ်ယောက်ပဲဖြစ်ဖြစ် သင့်မှာ အလွယ်တကူ ရှာဖွေနိုင်သော ဝဘ်ဆိုက...
NaidBux မှာငွေရှာပါ 8$ ပြည့်တိုင်း 2$ အပိုဆုငွေရယူပါ
Business Directory, Employer Job Offer, Jobs, Website Submission | aungsan | October 16, 2013
2013 အတွင်း အသစ်ထွက်ဝင်ငွေရှာဖွေဖို့အကောင်းဆုံး... အလွယ်ကူဆုံး..အလျင်မြန်ဆုံး ငွေရှာဆိုဒ်ဖြစ်ပါတယ်။။ Loading Time လဲမြန်တယ်..ကြော်ငြာတွေလဲ အပေးများတယ်..ကြော်ငြာ...
Mascot Media Production မွ ၀န္ေဆာင္မႈ
Business Directory, Free Business Listing, Other Services | Mascot Media | October 14, 2013
Mascot Media Production မွ Company Profile, TV Advertising, Music Video (mtv) မ်ားရိုက္ကူးျခင္းႏွင့္ Video Editing, 3D Animation, Graphic Design and Photography...
Via Myanmar မှ ပြည်တွင်းအဆင့်မြင့်ခရီးစဉ်များ
Business Directory, Business Services, Myanmar Places, Other Services, Services | viamyanmar | October 8, 2013
မင်္ဂလာပါ........ Via Myanmar မှ ပြည်တွင်းအဆင့်မြင့်ဘုရားဖူး၊ အပန်းဖြေ ခရီးစဉ်များကို ကောင်းမွန်သောဝန်ဆောင်မှုများဖြင့် စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးလျှက်ရှိပါသည်။ ကု...
Top Shine Day Travel
Business Directory, Free Business Listing, Other Services, Services | topshineday | October 4, 2013
စိတ်ပါဝင်စားသူများ အောက်ဖေါ်ပြပါလိပ်စာနှင့်Phone Numberများတွင်အသေးစိတ်စုံစမ်းနိုင်ပါသည်။
Page 42 of 43‹‹ 1 … 40 41 42 43 ››
All times are GMT 6.5. The time now is 6:40 pm.